मेस्सीले आँशु पुछेको टिस्यु पेपरको मुल्य ७. ४३ करोडमा बिक्री हुँदै, लिलामीको विज्ञापन हेर्नुहोस् « Gaunbeshi
मेस्सीले आँशु पुछेको टिस्यु पेपरको मुल्य ७. ४३ करोडमा बिक्री हुँदै, लिलामीको विज्ञापन हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति : 21 August, 2021
एजेन्सी । लियोनल मेस्सी विश्वका सबैभन्दा धनी खेलाडीहरु मध्ये एक मानिन्छन्। अब उसको आँसुको हरेक थोपा मूल्यवान भैसकेको छ । मेस्सीले प्रयोग गरेको टिश्यू पेपरको मूल्य समेत करोडौं पुगेको छ। मेस्सीले प्रयोग गरेको टिस्यु पेपर बेच्ने व्यक्तिको दाबी छ कि मेस्सीको आनुवंशिकी पनि त्यसमा छ जसले फुटबल खेलाडीको क्लोन बनाउन मद्दत गर्दछ।
मेस्सी स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाको हिस्सा थिए जबदेखि उनी होशमा आए। ३४ वर्षीय अर्जेन्टिनी फुटबलरले बार्सिलोनामा आफ्नो जीवनको २१ वर्ष बिताएपछि उनलाई बिदाइ गरे। यो पल उनको लागि धेरै भावुक थियो।
उनी मिडियासँग कुरा गर्दै रोए। उसको आँखा बाट आँसु झर्न थाल्यो। यस समयमा उनको साथी एंटोनेला पनि त्यहीँ थिए । भिजेको आँखा पुछ्नको लागी, उनले मेस्सीलाई एउटा टिश्यू पेपर दिए, जुन अहिले करिब ७। ४३ करोड रुपैयाँमा बिक्री भैरहेको छ।
वास्तवमा, एक अज्ञात व्यक्तिले दाबी गरेको छ कि उसले मेस्सीद्वारा प्रयोग गरिएका टिस्यु उसले संकलन गरेको छ र यी टिश्युहरु लाई एक अत्यधिक दर मा बेच्न को लागी एक अनलाइन विज्ञापनमा पनि राखेको छ।
अर्जेन्टिनी मिडिया आउटलेट ‘मिशनेस अनलाइन’ को रिपोर्ट अनुसार एक लोकप्रिय वेबसाइट ‘मर्काडो लिब्रे’ मा सम्पूर्ण घटना जोडिएको छ। एक अनलाइन उत्पादन कम्पनीले एउटा प्लास्टिकमा त्यो टिस्यु राखेको छ र मेस्सीको भावुक तस्बिर पनि राखेको छ ।
सन्दीप लामिछानेले गरे चमत्कार १ एकै ओभरमा २ विकेट, अमेरिका दवावमा
काठमाडौ । स्टार लेगस्पीनर सन्दीप लामिछानेले आइसीसी विश्वकपमा चमत्कार देखाएका छन् । उनले एकै ओभरमा
सन्दिपले चलाए जादू ? पपुवा न्यूगिनी यसरी भयो एकैछिनमा धरासायी, नेपाली क्रिकेटको बिश्वभर प्रशंसा
नेपाली क्रिकेटमा कहिलेकाँही जादू हुने गर्छ । यस्तै जादू शुक्रबार नेपाल र पपुवा न्यू
२० वर्षीको कलिलो उमेरमै अस्ताए राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी , देशले एक होनहार खेलाडी गुमायो
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ का २० वर्षीय कुस्तीका राष्ट्रिय खेलाडी सुरेश भट्टको मृत्यु भएको छ। आठौँ
भारतलाई दवावमा पारेको नेपाल यसकारण चिप्लीयो, मैत्रीपूर्ण फुटवलमा २ _१ ले पराजित के रहेछ कमजोरी ?
काठमाडौं । भारतविरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा नेपाल २(१ गोल अन्तरले पराजित बनेको छ